Iipodcast | Iphepha leendaba labaGcisa abaBonwayo kwi-Intanethi
Ikhaya » Iipodcasts
Ukusuka ekuphuleni iindaba kunye namagcisa okuqonda okucinga ngoku kunye neziganeko kwihlabathi liphela, i-VAI ijonge imvelaphi kulwalathiso lobugcisa base-Ireland ngokwendlela yokusebenza kunye namabali angasemva angenakufikelela kubaphulaphuli bakawonkewonke.
Amagcisa aBonakalayo eIreland: Iindaba zezoBugcisa kunye neMbono
Amagcisa aBonwayo eIreland abonelela ngothotho lwee-podcast ezigubungela ukucinga kwangoku kunye neengxoxo namagcisa kunye nabagcini kwi-Ireland yonke.
Mamela Apple Podcast Mamela IPodcast kaGoogle Mamela Spotify
Imenyu yokuBhaliswa kwePodcast
IVAN Podcast luthotho lwepodcast oluvela kwiiVenkile zeVenkile zaseIreland.
Ipapashwa rhoqo emva kweenyanga ezimbini, i-VAN Podcast ifaka iincoko ezikwi-intanethi, ezirekhodwa kude, kunye nabaxhasi abohlukeneyo kushicilelo ngalunye lwePhepha leNdaba le-Visual Artists. Oku kunika amathuba okuxoxa ngezinye zeengcamango ezivela kwimibhalo epapashiweyo, ngelixa kukwanikezela ukuqonda malunga nokusebenza ngokubanzi.
Isiqendu sesi-6 sinodliwanondlebe no-Aideen Barry, egxile kwikhomishini yakhe yangoku enkulu yeKaunas 2022, iNkunzi yeNkcubeko yaseYurophu, kunye nomboniso wakhe ozayo eyedwa eLimerick City Gallery yoBugcisa.
U-Aideen Barry ligcisa elibonakalayo lase-Ireland elisebenze kwaye labonisa kakhulu kulo lonke elase-Ireland nakwamanye amazwe. Wakhethwa njengelungu le-Aosdána ngo-2019, kunye neRoyal Hibernian Academy ngo-2020. U-Aideen umelwe nguGaleria Isabel Hurley eSpain, kwaye udibene ne-Catherine Clark Gallery eSan Francisco, kunye ne-tankstation yomama e-Ireland.
Inguqulelo ehleliweyo yolu dliwano-ndlebe iya kupapashwa kwi-VAN kaNovemba/Disemba 2021.
[Umfanekiso okhoyo: Aideen Barry, Klostės, imveliso isekhona; umfanekiso ngoncedo lwegcisa kunye neKaunas 2022, Ikomkhulu lenkcubeko yaseYurophu]
IVAN Podcast-Isiqendu 5: Uluhlu oluHlangeneyo
IVAN Podcast-Isiqendu 4: Elaine Hoey
IVAN Podcast-Isiqendu 3: UNathan O'Donnell noMarysia Wieckiewicz-Carroll
IVAN Podcast-Isiqendu sesi-2: IQela eliDibeneyo loMculi kunye neNethiwekhi yeAngelica
IVAN Podcast-Isiqendu 1: uCornelius Browne kunye noFrank Wasser
Imiboniso engabonakaliyo yePodcast-Isiqendu 7: URóisín White 'Ezi Milo ziMnyama'
Imiboniso engabonakaliyo yePodcast-Isiqendu 6: Ursula Burke 'Ubusuku obungamanga'
Imiboniso engabonakaliyo yePodcast-Isiqendu 5: UGary Coyle 'Ukuphupha amaphupha ahlukeneyo'
Hlanganani i-2019-Ukubonisa iNqaku (Ingxoxo yePhaneli)
Bonisa uLudwe lweZiqendu
Bonisa ulwazi lwePodcast